Poojana Pradhan - Nepali actress / model
Topic: Poojana Pradhan - Nepali actress / model
Author Topic: Poojana Pradhan - Nepali actress / model (Read 52689 times)
Re: Poojana Pradhan - Nepali actress / model
« Reply #10 on: August 14, 2009, 09:50:58 AM »
मलेसियामा मेरा धेरै फ्यान छन्
Written by आर.सी. गिरी ।
Sunday, 09 August 2009 00:27
मनोरञ्जनात्मक वेभहरुका पर्दामा होस् चाहे पत्रिकाहरुका रंगपृष्ठहरुमा होस् अनि चाहे लाइभ सो हरुमा । नेपाली ग्ल्यामर मोडलिङ क्षेत्रमा आफ्नो छुट्टै पहिचान कायम गरेकी ख्यातिप्राप्त मोडल तथा नायिका पूजना प्रधानका बारेमा धेरै रंग रिपोर्टिङहरु भए । आज उनै पूजनाका बारेमा धेरैले सुन्ने तथा पढ्ने गरेका सबैका लागि बीच सौभाग्य प्राप्त भएको छ, पूजनालाई प्रत्यक्ष भेट्ने र गफिने पनि ।
तीन महिने अमेरिका बसाईपछि तीन साता अघि मात्रै स्वदेश फर्केकी पूजना प्रधानका बारेमा केही दिनअघि कतिपय नेपाली पत्रपत्रिकाहरुका रंगपृष्ठहरुमा अमेरिका मन नपरेकाले नेपाल फर्केको समाचारहरु छापीएका थिए । वास्तवमै उनलाई अमेरिका मन नपरेकै रहेछ । "केही समय बस्नको लागि त ठिकै हो अरुको लागि मन पर्‍यो होला तर मलाई चााही साधै बस्न त आफ्नै नेपाल नै राम्रो लाग्छ । नेपाल नै मन पर्छ ।" अमेरीकाबाट फर्केपछि उनी अहिले आफ्नै प्रोफेसनल काम गरिरहको बताउाछिन् । उनका अनुसार, उनी अहिले केही नेपाली चलचित्रहरुका सुटीङका लागि व्यस्त छिन् । तनहुा सेवा समाज मलेसियाले आयोजना आयोजना दशैंमा आयोजना गर्न लागेको कार्यक्रममा आफ्नो कलाक्रेजलाई मलेसियामा रहेका दर्शकसामू पहिलोपटक खुराकी पस्किने बचन पूजनाले दिएकी छिन् पूजनाले । पूजनाले मंगलबार टेलीफोनमा भएको गफगाफमा सो बचन दिएकी हुन् । अमेरिका मन नपरेपछि स्वदेश फर्किएलगत्तै मलेसियामा रहेका नेपाली दाजुभाई तथा दिदीबहिनीहरुसाग आफुलाई सहभागी गराउन मलेसिया आउन निम्तो पाएकी पूजनाले टेलीफोनमा रमितलाई आफ्नो दम्दार जोडीका रुपमा ल्याउने पनि बताइन् । अघिल्लो सातामात्रै रमितले पूजनालाई लिएर नाच्न आउादैछु भनेका थिए । अघिल्लो साताको स्तम्भमा व्यक्त रमितको कुरा र यो स्तम्भमा पूजनाको कुरालाई मात्रै आधार मान्ने हो भने रमित र पूजनाबीच केही नजिकैको सम्बन्ध हुन पनि सक्ने अड्कल गर्न सकीन्छ । रमितले पूजनालाई पनि निकै मन पराएको कु्रा व्यक्त गरेकाले यी दुवैले एक अर्कालाई मन पराउदारहेछन भन्ने कुराको सहजै अनुमान लगाउन कुनै गाह्रो छैन । रमित र पूजनाको डान्सले उपस्थित दर्शकहरुलाई पनि नचाउनेछन् । "रमित र म मज्जाले नाच्छौं दर्शक सबैलाई नचाउाछौं ।" उनले भनिन् ।
शुरु-शुरुमा लाइभ सो गर्दै हिाड्ने गरेकी पूजना पछिल्ला समयमा मोडलिङमा निकै सक्रिय भएर लागेकी हुन् । एउटा चर्चित् मोडलदेखि डान्सर हुादै नायिकासम्मको उनको यो यात्राको अभूतपूर्व दिनहरुमा उनी ग्ल्यामर मोडलिङका कारण निकै चर्चामा आएकी थिइन् । लामो हाासोका साथ फोनमा निकै गफिंदै आफुलाई लभ पर्पोज धेरै आइरहेकोसमेत पूजनाले खुलासा गरिन् । तर उनले अहिलेसम्म कसैलाई पनि पर्पोज भने गरेकी छैनन् । १५ बर्षदेखि कला क्षेत्रमा लागिपरेकी यी होनाहार प्रतिा पूजना अब विवाह गर्ने सोचमा छिन् तर कोसाग गर्ने भन्नेमा उनी अलमलमा परिरहेकी छिन् । मत्लब भनेजस्तो केटा पाएकी छैनन् । किनकी यो विषयमा निधो पनि भएको छैन । "म त अलमल छु । प्रेम प्रस्तावहरु धेरै आउाछन्, लभ गर्न पनि टाइम नै भएन । बिहे अहिलेसम्म कसलाई गर्ने भन्ने नै भएन देशको लागि केही गरौं भन्ने लाग्छ, हुन त प्रेम गर्न त्यति आवश्यकता हो जस्तो लाग्दैन । कसलाई बिबाह गर्नेहोला हेर्नुस् न," उनले गहन हाासो हाास्दै गफिादै भनिन् ।
मलेसियामा हुने कार्यक्रमको निम्तो पाएकोमा पूजना निकै खुशी छिन् । त्यसैले होला उनले आफ्नो भावना यसरी पोखीन् 'रमाइलो लागी रहेको छ । सम्पूर्ण मेरा फ्यान, नेपाली दाजुभाई तथा दिदीबहिनीहरुलाई म आफुले सक्दो मनोरञ्जन बााड्नेछु ।' उनले मलेसियामा धेरै फ्यानहरु रहेको कुरा बताइन्, तर ती सबैलाई उनकोखबर एउटा खबर छ, "अहिले मलाई निकै खुशी लागेको छ, मेरा फ्यानहरुलाई मलेसिया आउदैछे पूजना भनिदिनुस् ल ।" पहिलोचोटी मलेसिया आउन लागेकी पूजना आफ्नो कला/प्रस्तुतीको दर्शकहरुबाट सुझाव तथा सल्लाह अनि प्रतिक्रियाको आवश्यकता भएको बताउछिन् । उनी भन्छिन् 'कतिले हेरेर मन पर्‍यो भन्नुहुन्छ, कतिले मन परेन भन्नुहुन्छ । त्यही भएर मेरो प्रस्तुतिहरु हेरिदिनुहुन उहाहरुलाई मेरो रिक्वेस्ट छ । अनि राम्रो र नराम्रो दुवै पक्षको बारेमा कोमेन्टको आशा गर्दछु । यसले गर्दा मलाई मेरो यो कला-यात्रामा अघि बढ्न निकै सघाउ पुग्छ जस्तो लाग्छ ।'
लमजुङको पहाडी भेगमा जन्मिएर काठमाडौंको चिसो हावापानीमा हुर्केकी पूजना अहिले दर्शक तथा शुभेच्छुकहरुको मायाको तातोले कलाक्षेत्रमा चर्चाको शिखरमा पुगेकी छिन् । लमजुङमा जन्मेपनि उनी काठमाडौंमा आफ्नो बाल्यकाल बितेको बताउछिन् । "कला त मेरो कर्मक्षेत्र नै भयो, अहिलेसम्म त राम्र्रै छ र भविष्यमा पनि अझै राम्रो हुन चाहन्छु । त्यसैले प्रयासरत् छु ।
मलेसियामा रहेका नेपाली दर्शक तथा कलाप्रेमीहरुलाई रमित र पूजनाको नृत्यसागै झुम्ने रहर पुरा हुन अब डेढ महिना मात्र बााकी छ । भनेजस्तो ब्वाईप|mैन्डले पर्पोज गरेमा उनले स्वीकार्न पनि के बेर , मलेसियाको रंगबजारको यो कार्यक्रममा । तर पहिलोपटक मलेसिया आउन लागेकी पूजनाले मलेसियाभरि आफ्ना फ्यानहरु भएको खुलासा गरीसकेकाले गर्दापनि होला सायद उनले यसो भनिन् "मेरा फ्यानहरु निकै आतुर हुनुहुन्छ भन्ने खबर पाएको छु, उहााहरुलाई नआत्तिनुहोला भन्न चाहन्छु र मैले त त्यहाा दर्शक तथा फ्यानहरुलाई चित्त बुझाएर मात्रै र्फकनेछु ।
source - nepalmalayakhabar.com
« Reply #11 on: August 14, 2009, 09:54:16 AM »
Quote from: ocnrana on August 02, 2009, 03:21:48 AM
i met her in houston and asked couple of question like artists who run away when they come here and she was like... they should be deported , if she comes across to any artist like that she is gonna report... now i hear she is in virginia working in some restaurant, bitch hippocrate...
सांस्कृतिक कार्यक्रमका लागि तीन महिना अमेरिका घुमेर फर्किएकी नायिका पूजना प्रधानलाई अमेरिका मन परेन रे ! बिहीबार देश फर्किएकी पूजनाले भनिन्, 'सबैले अमेरिका-अमेरिका भन्छन् । मलाई त खासै मन परेन ।' देशप्रेमी बन्ने कोसिस गर्दै उनले थपिन्, 'मलाई त मेरै देश नेपाल प्यारो छ । सबैले यतै बस, काम खोजिदिन्छौँ भनेका थिए । मलाई त बस्नै मन लागेन ।'
पूजनाले पैसा कमाउनका लागि मात्र अमेरिका ठीक भएको बताइन् । भनिन्, 'पैसाकै मुख हेर्ने हो भने यहाँभन्दा धेरै कमाउने अवसर मिल्छ त्यहाँ । यहाँको जस्तो स्वतन्त्र जीवन हुँदो रहेनछ त्यहाँ ।' अमेरिकाका दसवटा स्टेट घुमिन् रे उनी । तीन महिनामा दसवटा स्टेज प्रोग्राम गरेको बताउँदै अमेरिकानिवासी नेपालीले आफूहरूको कार्यक्रम रमाई-रमाई हेरेको बताइन् । 'तर, एउटा कुरामा भने मन खिन्न भयो ।' पूजनाको मन केले खिन्न भएको रहेछ त ? 'त्यहाँ बसेका अधिकांश नेपालीले आफू नेपाली हुँ, मेरो आफ्नै देश छ, आफ्नै भाषा छ भन्ने भुल्दा रहेछन् । नेपालीहरू आफूलाई भुलेर पूरै अमेरिकी बनेका रहेछन् । यस कुरामा भने चित्त खिन्न भयो ।' अमेरिका बसाइका क्रममा उतै बसेकी नायिका जल शाह, गायक प्रेमराजा महत, संजीव प्रधान तथा गायिका सरिश्मा अमात्यसँग भेट भएको बताउँदै उनले नायिका जलमा अझै अभिनयमोह रहेको बताइन् । 'जलदिदीमा नेपाली फिल्मप्रतिको मोह अझै घटेको रहेनछ । उहाँ नेपाल मिस गरिरहनुहुन्छ ।' पूजनाले भनिन्, 'बाल्टिमोरमा बस्नुहुँदो रहेछ । हामी गएको थाहा पाएर एक हप्ता हामीसँगै बस्नुभयो ।
पूजनालाई अमेरिकाको निट एन्ड क्लिन तथा डिसिप्लिन निकै मन पर्‍यो रे । 'हामी नेपाली सधैँ धूलो, माटो, धुवाँ, फोहोर-मैलामा हुर्किरहेको बानी, त्यहाँ त चारैतिर सफा । सुरुमा त म आत्तिएँ ।' पूजना हाँस्दै बोलिन्, 'बानी नै भइसकेछ । धुवाँ-धूलो नदेख्दा त अत्यास लाग्दो रहेछ ।' अमेरिकामा मेसिनझैँ काममा घोटिने एकले अर्काको वास्ता नगर्ने मान्छेको बानीले पनि उनलाई दिक्दार बनायो रे । 'म त सक्दिनँ, अमेरिका गएर बस्न ।'
पूजना देशभक्तिपूर्ण कवितामा पोखिइन्, 'नेपाली थियौँ, नेपाली हौँ, नेपालमै रहन्छौँ । नेपालमै जन्मियौँ, नेपालमै हुर्कियौँ, नेपालमै मर्नेछौँ ।'
स्रोतः नयां पत्रिका
« Reply #12 on: August 17, 2009, 11:48:17 AM »
« Reply #13 on: January 04, 2013, 02:40:13 PM »
« Reply #14 on: January 04, 2013, 02:40:37 PM »
« Reply #15 on: January 04, 2013, 02:40:56 PM »
« Reply #16 on: January 05, 2013, 02:30:54 AM »
« Reply #17 on: January 05, 2013, 02:31:20 AM »
« Reply #18 on: June 30, 2015, 01:33:47 AM »
name confusion --> http://nepaliactress.com/confused-pooja-poozana-poojana-pradhan-gurung-and-stri/
« Reply #19 on: August 14, 2015, 01:56:15 PM »
मेन कुरो त भिषा नपाएर रैछ
Quote from: tundikhel on June 30, 2015, 01:33:47 AM